CID-da Soomaaliya oo qabtay taliyihii hore ee ciidanka Asluubta oo xabsi daa?in lagu xukumay – Radio Daljir
CID-da Soomaaliya oo qabtay taliyihii hore ee ciidanka Asluubta oo xabsi daa?in lagu xukumay
Oktoobar 30, 2013 5:13 b 0
Muqdisho, October 30, 2013 – Ciidamada dembi-baarista dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay Sareeyo Guuto Cabdi maxamed Ismaaciil taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed, kaas oo horay loogu xukumay xabsi daa?in.
Sareeyo guuto Siciid Axmed Kediye taliyaha ciidanka dembi baarista ee Soomaaliya ayaa sheegay in lagu guulaystay soo qabashada taliyihii hore ee Asluubta oo ku dhuumanayey degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, ciidanka ayaa sheegay in ay howlgal ku fuliyeen.
Taliyihii hore ee asluubta Cabdi Maxamed ayaa maxkamada ciidamada qalabka-sida ku xukuntay xabsi daa?in xili lagu eedeyey in uu amray sii daynta rag ka tirsan Al-shabaab oo ku xirnaa xabsiyada magaalada Muqdisho.
?Computer iyo labba telfoon ayaa lagu soo qabtay dambiilaha oo ku dhuumanayey degmada Madiina.? Ayuu yiri taliyaha waaxda dembi-baarista Siciid Kadiye, waxaa uu intaas ku daray in baaris dheer lagu samayn doono.
Murashaxiinta ?Kor-meerayaal caalami ah waa muhiim in la helaa wakhtiga doorashada Puntland?